Prototype akpụzi Nsukka na Suppliers - China prototype akpụzi Factory
Yuanfang bụ onye gị na-akwụsị onye n'ihi na ngwa ngwa prototype ebu & Ọgwụ na ịkpụzi ọrụ
China Plastic Ọgwụ akpụzi Ime Companies
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye ebu ebu ụzọ tupu ha agaa n'usoro imepụta ihe dị iche iche.
Ndị a bụ ndị na-ebu ọnụ dị ala nke na-adịkarị iche site na mmepụta ihe n’ihi na ha bu n’obi maka oge dị mkpirikpi.
Gini bu ihe eji eme ihe?
Ebu ndị na-emepụta ihe ọkụkụ na-adịkarị iche site n’ichepụta ihe n’ihi na a naghị ezube ha maka iji ha rụọ ọrụ ogologo oge. Dị ka otu n'ime ndị isi ụlọ ọrụ, Yuanfang Technology nwere ndị ọkachamara nwere ike ijikwa ụdị ebu ọ bụla (gụnyere prototypes), na-enye ebu ebu oke mma na asọmpi asọmpi.
Gini mere eji eme ihe ndi ozo?
Dịka e kwuru, ebu n'ebu na-arụ ọrụ dị iche karịa ngwaahịa ikpeazụ, gụnyere ebumnuche ndị a:
1. moldkpụrụ ebu ụzọ buru ụzọ dịrị ọnụ ala nke na-enyere aka nwalee ebu tupu arụpụta ikpeazụ.
2. Oge dị mkpirikpi iji nweta nsụgharị nke nwere ike ịnwale, na-ewe izu 2-4.
Ebube ihe eji eme ihe abughi ihe edere n'azu, nke ahu putara uzo nke ulo.
Ihe nkedo mbu abughi uzo ikpeazu, kama obu uzo eji aru ulo a na oge. N'adịghị ka ọkpụkpụ nkedo ikpeazụ, a na-eji ihe eji eme ihe dị oke ọnụ, dị ka nchara na-adịghị ike, aluminom ma ọ bụ P20. Ebe ọ bụ na ha esighi ike dịka nkedo ogwu ikpeazụ, ị gaghị enwe ike iji ha na ngwaahịa ikpeazụ.
Olee uru nke ndapụta ebu?
Ọ bụrụ na ị maghị otú ị ga-esi zute nkọwapụta nkọwa achọrọ, ma ọ bụ na ejighi n'aka maka ọdịdị nke ngwaahịa ikpeazụ, ị nwere ike ịme nyocha dị mfe na nke bara uru site na ịkọwapụta tupu ịmalite ịmalite ịkpụzi.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ejighi n'aka etu esi esi mepụta ngwaahịa ọhụrụ na mbido. N'okwu a, usoro ịmịpụta ihe eji arụ ọrụ nwere ike inyere gị aka ịchọpụta usoro dị irè na mgbe ịkwesịrị ịlaghachi na mbadamba ịbịaru .. Ebe ọ bụ na ị na-eji ihe ndị dị ọnụ ala na usoro ngwa ngwa, ị gaghị enwe nrụgide site na ịgaghị mkpa.
Dịka otu n'ime ndị isi na ụlọ ọrụ ahụ, YF Mold nwere ndị ọkachamara nwere ike ijikwa ụdị ebu ọ bụla, gụnyere prototypes. Anyị na-enyere gị aka ịzụlite oru oma na-eri-irè nwale tupu ayak a ebu maka ikpeazụ mmepụta. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji bụrụ onye ndu na ụlọ ọrụ na-akpụzi ebu. Ọ bụrụ na ị dị njikere ịrụ ọrụ na prototype plastik ebu, nweere onwe gị izitere gị ozi ma ọ bụ zitere anyị ọrụ mmemme gị.
Akpụzi Factory, Omenala akpụzi, Ọgwụ Nkedo na Metal Inserts, Ndị na-akpụzi ihe ntanye, Ndị na-emepụta ebu ebu, Plastic Fanye Nkedo,